समृद्ध क्षेत्र, समृद्ध जिल्ला र समृद्ध प्रदेश मेरो सपना « Anumodan National Daily
नेकपा (एमाले) कैलाली अध्यक्ष दीर्घ सोडारी कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ (क) मा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । २०४६ सालमा अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएर राजनीतिक जीवन आरम्भ गरेका ४० वर्षीय सोडारीले पार्टीका विभिन्न तहमा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । २०६६ सालमा एमाले कैलालीको सचिव तथा २०७० सालमा अध्यक्ष निर्वाचित उहाँले फाया नेपाल, एसबीबीएम, मानवअधिकार एलाइन्स लगायत थुप्रै सामाजिक संघसंस्थामा पनि योगदान पुर्‍याउनु भएको छ ।
उम्मेदवार प्रदेश सभा कैलाली
क्षेत्र नम्बर ४ (क)
स्नातक तह उत्तीर्ण सोडारी २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट संविधान सभा सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । यस पटक उहाँ बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बन्नुभएको छ । कुशल संगठक मानिएका सोडारीको अध्यक्ष कालमा गत स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीमा १३ मध्ये सात तहमा एमाले विजयी भयो । र, एमालेकै नेतृत्वमा कैलाली जिल्ला समन्वय समिति पनि गठन भयो । बंगलादेश पाकिस्तान, भारत, कम्वोडिया, चीन, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकको भ्रमण गरिसकेका सोडारी आफ्नो प्राथमिकता आफ्नो क्षेत्र तथा कैलाली र समग्र सुदूरपश्चिमको विकास रहेको बताउनु हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा १४ पटक जेल जीवन बिताएका उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
– जनताले एमालेलाई नै किन भोट दिनुपर्ने ?
जनताले एमालेलाई किन भोट दिने ? यो प्रश्नको आम जनता स्वयंले मनन् गर्नु पर्दछ । जनताले एमालेले विगतमा गरेका जनमुखी कामलाई सधैं उच्च प्रशंसा गरेका छन् । देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । स्थिर सरकारका लागि गठबन्धन आवश्यक परेको हो । त्यसैले बाम गठबन्धन निर्माण भएको हो । स्थिर सरकारमार्फत समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि बाम गठबन्धनलाई भोट दिनु जरुरी छ । नेपालमा पहिलो चोटी प्रदेश सरकार बन्दै छ । प्रदेश नम्बर ७ आफैंमा पछाडि पारिएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका लागि गठबन्धन र मलाई यस क्षेत्रका नागरिकले भोट दिनु हुनेछ भन्ने आशा छ । ७ नम्बर प्रदेशको कृषि, पर्यटन, पर्यावरण र धार्मिक पर्यटन यहाँको सम्पत्ति हो र यसको अधिकतम परिचालन र उपयोग बढाउनु पर्दछ । चुरेको संरक्षण, थप आयआर्जनका लागि कृषि र वनको आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण गरी समृद्ध ७ नम्बर प्रदेश, समृद्ध कैलाली र समृद्ध क्षेत्र नम्बर ४ मेरो सपना छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ (क) का १६ वडामध्ये स्थानीय चुनावमा बाम गठबन्धनले १२ वडा जितेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हौसला बढाउन पनि माथिल्लो सरकारमा बाम गठबन्धनको जीत जरुरी छ । जनताले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ ।
– तपाई एमाले कैलालीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर, पार्टी सञ्चालनमा तपाईंको निकै आलोचना हुने गरेको छ नि ?
कसले के भन्नुहुन्छ भन्नुभन्दा पनि तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्दछ । २०६४ को संविधान सभाको चुनावमा कैलालीमा एमालेले एउटै पनि सिट जित्न सकेन । २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा एक सिटमा चित्त बुझायौं । तर, २०७४ सालसम्म आइपुदा एमालेको अवस्थान निकै परिवर्तन आइसकेको छ । हामीले कैलालीमा १३ स्थानीय तहमध्ये ७ मा जितेर पहिलो पार्टी भयौं । नेकपा (एमाले) लाई यो तहसम्म ल्याइपुर्‍याउन मैले निकै मिहिनेत गरेको छु जस्तो लाग्छ । हाम्रो पार्टीले जनताको विकास र समृद्धिका लागि धेरै काम गरेको छ । एमाले क्याडर बेस पार्टी हो । पार्टीभित्रको निर्वाचनमा हुने प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
– माओवादीसंग पार्टी एकताको कुरा छ । सबैलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ त ?
नेकपा (एमाले) लाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन तथा स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्न धेरै कठिनाई भोग्नुपर्‍यो । हो, पार्टीभित्र अझैं पनि गुटबन्दीका अवशेष छन् । तर प्रत्येकको योग्यता र क्षमताका आधारमा नै अवसर दिइन्छ । मसंग असहमत भएकालाई हामीले उम्मेदवार बनाएका छौं र जितेका छौं । त्यसैले पार्टी भित्रको गुटबन्दी अस्थायी हुन्छ । पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ विवाद देखिने गरेको छ । खासगरी नेतृत्व चयनका बेलामा । एमाले अब्बल लोकतान्त्रिक पार्टी हो, अरू जस्तो नाममा मात्रै लोकतान्त्रिक हुने पार्टी होइन । अरू पार्टीमा वर्षाैवर्षसम्म चुनाव हुँदैन, मनोनित गरेर नेतृत्व चयन गर्ने हामीले गर्दैनौ । एमालेमा स्थायी नेतृत्व हुँदैन । केन्द्रका नेतालाई समातेर नेता बन्ने भन्ने हुँदैन । म पनि सधैं जिल्ला अध्यक्ष हुने होइन । पार्टी एकीकरण पछि यसको व्यवस्थापान हुने छ ।
– तपाईको राजनीतिले तपाईको क्षेत्रको विकासमा के प्रभाव परेको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
म २०५० सालदेखि निरन्तर मसुरिया वडा नम्बर १ (हालको गौरीगंगा(५) मा विद्यार्थी थिए र, त्यतिबेलादेखि नै पार्टी राजनीतिमा लागे । म त्यस क्षेत्रको विकास र जिल्लाको विकासमा लागेको छु । सामाजिक संस्थामार्फत पनि काम गरेको छु । सामाजिक संस्था मार्फत मुक्त कमैया पुनस्र्थापनामा र व्यवस्थापनमा सक्रिय रहने । हेर्नोस्, विकासका लागि व्यक्तिलाई पद पनि आवश्यक हुन्छ । जिल्लामा त हामी सरकारमा आएनौं, तर गाविसमा एमालेले जितेको थियो । २०५१ सालमा चक्र डंगौरा चौधरी एमालेबाट सांसद जित्नुभयो । त्यसअघि र पछि हामी सत्तामा थिएनौ । अघिल्लो चुनाव म माओवादी केन्द्रसंग पराजित भए । अहिले हामी माओवादी संगै छु । स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले फराकिलो मतले जितेको छ । त्यसैले यो क्षेत्रको विकासको जिम्मा हाम्रै हो । मैले अब विकास गर्छु ।
– तपाईको क्षेत्र लक्षित विकासका काम के के भए ?
अहिलेसम्म म कुनै पदमा थिइन । तर पनि विकासका काममा लागेको छु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिने भवन, जिल्ला विकास समितिमार्फत हुने काममा निरन्तर लागेको छु । तर, अझैं धेरै काम गर्नु बाँकी छ । बाटो पुलको काम बाँकी छ । लिक्मा, खुटिया, गौरीगंगा शिवगंगा जस्ता ठूला नदीले उजाड र मरुभूमिकरण गर्दैछ त्यसलाई रोक्न ठूला तटबन्धका कार्यक्रम ल्याउन ढिलो भइसकको छ । बहादुर सम्शेरले बनाएका गर्भा दरबार तथा मोहन्याल मन्दिरलाई संरक्षण गर्नु छ । हामीलाई कहाँ के गर्नु पर्छ थाहा छ । तर अहिलेसम्म चौमाला, मसुरियामा मात्रै घुम्यौं । विकास गर्ने स्थानमा पुग्नै सकेनौं । अब यी कार्य पूरा गर्नका लागि हामी प्रदेश सरकारमा पुग्नु जरुरी छ । यी विकासका योजना पूरा गर्न म प्रदेश सरकारमा पुग्नेछु र काम पूरा गर्नेछु । हाम्रो पार्टी गठबन्धन केन्द्र सरकारमा पुग्दैछ ।
– यो क्षेत्रमा विकासका प्रमुख सवालहरू के के हुन् ? जनताका मागहरू के रहेको पाउनु भएको छ ?
हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी बन्दै छ । प्रदेश राजधानी बन्दा त्यस वरवरबाट राजधानीका लागि चाहिने पूर्वाधार, प्रविधि, कृषि उत्पादन, पर्यटन व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जनाको कुरा साना अवसर होइनन् । यसले यहाँका जनताको आयस्तर र रोजगारी हवात्तै बढाउनेछ । हाम्रो पार्टीको नवौं महाधिवेशनले देशलाई समाजवादतिर लैजाने संकल्प गरेको छ । समाजवाद गफ गर्ने कुरा मात्र होइन । नयाँ संविधानको मर्म पनि हाम्रो समाजवादको सपना हो । हाम्रो पार्टीको चुनावी तालमेल र एकता समाजवाद स्थापनाका लागि हो । सबै काम गर्ने हातलाई काम दिने व्यवस्था समाजवाद हो । हामीमाथि स्थिर सरकार, प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन्छौं । औद्योगिकीकरण गर्छौ । अबको पाँच वर्षमा हामी समाजवादको बाटो तय गर्नेछौं । यसकै लागि जनताले हामीलाई भोट दिन्छन् भन्ने विश्वास छ । यो क्षेत्र पहाड र तराई मिश्रित क्षेत्र हो । यसले तराई र पहाड जोडने बाटाहरू अझ कैलाली र पहाडका अन्य जिल्ला जोड्ने महत्त्वपूर्ण बाटा निर्माण गरेर व्यावसायिक, व्यापारिक र कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँका सुकुम्बासी, मुक्त कमैयाको पूर्ण व्यवस्थापन यसै अवधिमा गरिसक्नु पर्नेछ ।
– जनताका आधारभूत आवश्यकता, मुक्त कमैया र सुकम्वासी समस्याबारे के भन्नुहुन्छ ?
समस्या धेरै छन् । दुई वटा क्याम्पस छन् । तिनको सुधारका लागि लगानीको अभाव छ । गौरीगंगा नाम मात्रको नगरपालिका हो । त्यसलाई साच्चिकै नगरपालिका बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । व्यवस्थित बसोवास, आधुनिक कृषि, सिंचाईं पूर्वाधार भएको योजनावद्ध नगरपालिका आवश्यक छ । समग्रमा स्थानीय तह हाम्रो हातमा छ । प्रदेश र केन्द्र हाम्रो हातमा आउँदैछ । जनताको अप्ठ्यारो जीवनबाट सजिलो बनाउन अथक मिहिनेत गर्नेछु । यसका साथै मुक्त कमैया, सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण, विपन्नलाई रासन कार्ड वितरण गरेर प्रत्येक वडामा सुपथ साझा सहकारी पसल स्थापना, अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नगर गुरुयोजना निर्माण, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषक पेन्सन कार्यक्रम, दश किसान एक ट्यूवेल कार्यक्रम सञ्चालन, कृषिको आधुनीकरण, कोल्डस्टोर स्थापना, कृषकलाई अनुदान, मल विउविजन केन्ऽ स्थापना, कृषि उत्पादन संकलन केन्ऽ स्थापना गरेर कृषि उपज उचित मूल्यमा खरिदको व्यवस्था मिलाइने छ । खेल क्षेत्रको विकास गर्ने युवालाई स्वदैशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछु । विकास निर्माण कार्यमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पहल गरिने छ । हामी स्थानीय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा रहने प्रतिनिधिहरू मिलेर काम गर्ने छौं । जनताको मत खेर फाल्ने छैनौं ।
मेरो अनुरोध छ– तपाईको भोट निर्णायक हुने छ । गर्विलो हुनेछ । यसले यस क्षेत्रको सपना पूरा हुनेछ । सम्रग नेपाल, ७ नम्बर प्रदेश, कैलालीलाई समृद्ध बनाउने योजना हामीसँग छ । हामीले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामार्फत त्यो सपना पूरा गर्नेछांै । भोट हालेका जनतालाई आत्मग्लानी हुन दिने छैनौं । गर्व गर्न लायक काम गर्नेछौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौं ।
धनगढी / सर्वोच्च अदालतले संसद ( प्रतिनिधि सभा ) पुर्नस्थापना गरेपछि धनगढीमा स्वागत र्याली निकालिएको